Ny fijerena ny fomba famakiana ny lahatsoratra dia miaraka amin'ny Statistické slovo čitelnosti
Fehezam-boninahitra iray isaky ny manoratra amin’ny vahoaka dia ny ankamaroany dia mamaky amin’ny enina amin’ny faha-enim-bolana amin’ny famakian-teny. Raha ny anameraroan’ny amerikanina sy ny hafa dia mandroso firenena mamaky teny, ny habetsaky ny fahaiza-mamaky boky dia mety miovaova be.
Alao sary an-tsaina ny fahasamihafan’ny mpihaino anao. Ny olona voalohany mitsidika ny tranokalanao dia mety hamaky amin’ny ambaratonga oniversite ary mahatakatra teny lehibe, fa ny mpitsidika tranokala manaraka dia mety mila rakibolana mba hahalala ny zavatra lazainao. Tena mahakivy izany ary eo amin’ny tontolo an-tserasera, isay tian’ny olona ny fampahalalana eo no ho eo, ny tranga vaky ny mpamaky iray mandany fotoana hikaroka teny tsy mahazatra dia somary mangatsiaka ihany. Mamadika mpamaky fotsiny ianao.
Tsy vitan’ny hoe zava-dehibe ny fijerena ny haavon’ny fanoratanao, fa te hahazo tsara ianao fa mora vakiana. Ny antontan’isa mora vakiana momna ny teny dia fomba iray ahafahana miantoka ireo lahatsoratrao izay tsy vitan’ny fisintonana ny sain’ireo mpamaky rehetra anao, fa ny fitandreman’izy ireo hatrany.
1.3 Statistická čitelnost
Noho ny fahafahanao mahalala ny dikan’ny teny ohatra, dia tsy midika isany fa ny mpamaky no ho tonga saina avy hatrany. Azonao atao ny mamantatra hoe ahoana no famakiana ny lahatsoratrao miaraka amin’ireo fomba maromaro samihafa.
Mametraka pluginy mifandraika amin’ny BlogPress blogo. Manontany fotsiny raha mora vakina ny lahatsoratra. Eny sa tsia.
Misy fitaovana an-tserasera tsara iray antsoina hoe Paper Rater izay ampiasaiko indraindray handinihana ireo lahatsoratra ireo, indrindra raha reraka aho rehefa manoratra na amin’ny fe-potoana haingana izay tsy mamela ny fanoušek betsa matako baka mataka baka mataka baka. Paper Rater ity manaraka ity:
Nejlepší ze všech? Ny mpanolotra taratasy dia afaka amin’ny dikan-teny fototra. Raha te hahazo dikan-doka tsy misy adiresy ianao, dia afaka mampiasa vola ao amin’ny Premium Paper Rater.
Ampifanaraho amin’ny manaraka ny baiko etsy ambany. Irisho toro-lalana ireo dia hiasa ho an’ny MS Word 10 a MS Word 2013.
Eo ambanin’ilay fizarana mitondra ny lohateny motyka "Rehefa ny fitsipi-pitenenana sy ny fifehezana amin’ny teny" dia tokony hanamarina boaty roa.
Ankehitriny, ny fahatakarana ny isa amin’ny Flesch Čtení dia somary sarotra, saingy tsy sarotra loatra. Ny Microsoft dia manazava amin’ny antsipiriany momba io